SIR CULUS: Kulan uu Muse Bixi la yeeshay wafdi ka socda Dubai oo natiijadiisii noqotay mid mad-madaw badani hadheeyey iyo arrimo kale oo saamayn ku yeelan doona dhaqaalaha sii xumaanaya ee Somaliland. | Somali News Network - Magaalo.com
SIR CULUS: Kulan uu Muse Bixi la yeeshay wafdi ka socda Dubai oo natiijadiisii noqotay mid mad-madaw badani hadheeyey iyo arrimo kale oo saamayn ku yeelan doona dhaqaalaha sii xumaanaya ee Somaliland.
Submitted by Anonymous on Sat, 01/13/2018 - 07:39
Awdalpress – London – Wafdi ballaadhan oo ka socda dawladda Isku Tagga Emerat-ka oo dhawaan socdaal ku yimid dalka Somaliland, ayaa madaxweyne Muse kala kulmay waji-gabax. Kadib markii uu Muse ka hor yimid heshiiskii Berbera, isaga oo dalbaday in wax ka baddal lagu sameeyo heshiiskaasi. Balse ay xubnaha wafdigu qaadan kari waayeen.
Maamulka dekedda Dubai oo ay weheliyaan mas’uuliyiin ka socda dawladda UAE, ayaa hore heshiis ula galay dawladdii Ahmed Siilaanyo, heshiiskaasi oo isugu jiray in ay la wareegaan maamulka Dekedda Berbera iyo saldhig ay dawladda UAE ka samaysato Berbera.
Bilowgii dhismaha hawsha dekedda in la galo, ayaa waxa hakisay doorashada Somaliland, oo la door biday in aan laga hor dhicin, fulinta heshiiskana ay hirgelinteeda la sugaan dawladda cusub ee dhalan doonta. Laakiin caqabaddan Muse kala hor yimid heshiiskaasi, waxa ay keentay is faham-waa durba ka dhex curtay UAE iyo Somaliland, waxana laga baqayaa in xaaladdaasi cusubi keeni doonto dhabar jab dhaqaale oo ka maanta ka sii daran, oo mustaqabalka dhaw soo wajaha Somaliland.
Dhinaca kale UAE waxa ay ka warqabtaa socdaalkii dhawaan uu Muse Bixi iyo xubno dawladdiisa ahi ku tageen dalka Djabouti oo tartan xoog badani ka dhexeeyo dekedda Jabal Ali ee Dubai. Waxana ay UAE-ku ka cabsi qabaan, in ay talada Berberi hoos timaaddo Madaxweyne Ismail Omer Geelle. Oo aanay xidhiidh fiican lahayn.
Sidoo kale waxa dawladda Emerat-ku xilligan xidhiidh fiican la leedahay Dawladda Federaalka Somalia iyo maamullada Puntland iyo Jubbaland oo ay heshiis ka Berbera mid la mid ah la galeen dekedaha Kismayo iyo Boosaaso. Taasina ay keeni karto in xoolaha u dhoofa khaliijku ay ka dhoofaan dekedahaasi. Sidoo kale waxa dad xog ogaal ahi hoosta ka xarriiqeen in ay dhici karto in ay dawladda Emerat-ku dekedahaasi ka sameeyaan maal-gashi gaadhsiisan heer warshadeed.
Isku soo wada duuboo, dhaqaalaha Somaliland iyo siyaasadda isbeddelka badani ku socdo, ayaan ahayn kuwo is qabta, colaadda immiga ka taagan bariga Somaliland, ee u dhaxaysa beelaha Harti iyo maamulka Somaliland ee ay hoggaamiyaan beelaha Jeegaanta ayaa iyana keeni kara, colaad ku baahda beelaha wada dega geeska Afrika. Taasina ay sababto in xoolaha ka yimaadda bari iyo Ethopia laga dhoofiyo Boosaaso iyo Djabouti. Berberina ay noqoto meel haawanaysa.